FANAFIHANA TAO BETSIZARAINA : Nidoboka am-ponja ilay jiolahy mpamerin-keloka – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 12:41
Ireo jiolahy voasambotry ny zandary taorian’ny vela-pandrika natao azy ireo.
Accueil/Songadim-baovao/FANAFIHANA TAO BETSIZARAINA : Nidoboka am-ponja ilay jiolahy mpamerin-keloka
FANAFIHANA TAO BETSIZARAINA : Nidoboka am-ponja ilay jiolahy mpamerin-keloka
Nisehoana fanafihan-jiolahy mirongo sabatra sy zava-maranitra tao Betsizaraina Ambohimangakely, ny herinandro lasa teo. Taorian’ny loharanom-baovao, tamin’ny olona tsara sitrapo, voasambotra ny roa tamin’ireo jiolahy nanao fanafihana tamina toeram-pivarotana iray, izay mpamerin-keloka ny iray. Niakatra fampanoavana ary naiditra am-ponja vonjimaika izy ireo ny farany herinandro lasa teo…
Rado Harivelo 12 janvier 2021
Nitrangana fanafihana tsy nahomby tao Betsizaraina Ambohimangakely, ny 6 janoary lasa teo. Raha ny angom-baovao, andian-jiolahy miisa dimy no nanafika tokantrano iray tao an-toerana. Bandy dimy mirongo sabatra sy zava-maranitra ireo nanao fanafihana ireo, saika hiditra an-keriny tao amina toeram-pivarotana enta-madinika iray. Nopitsohin’ireo jiolahy ny varavarankely, saingy henon’ny tao an-trano. Vao naheno izany ny tao an-trano dia raikitra avy hatrany ny fitsofana kiririoka nanairana ny mpiara-monina teo amin’ny manodidina. Saika mbola hikiribiby hiditra ny trano ihany ireo mpanafika, saingy notohanan’ny tompon-trano ao an-trano izany. Rehefa naheno ny fitsofana kiririoka ny manodidina, dia niantso avy hatrany ny Zandarimaria ao Ambohimangakely. Tsy nahavita nanao fanafihana ireo trano saika hotafihany ireo jiolahy vokatry ny fahatongavan’ireo olona manodidina, dia vaky nandositra nankany amin’ny ilay tanàna antsoina hoe Mahatsara. Nialohan’ny nitsoahan’ireo olon-dratsy, dia notorahin’izy ireo tamin’ny tapa-biriky ilay varavarankely saika hotafihiny, ka nahazo fitoeran’entana tao anatiny, ka namparatra ny lohan’ilay raim-pianakaviana tao an-trano, ka nahatataka ny handriny.
Ny 7 volana janoary, dia nahazo loharanom-baovao, ny avy ao amin’ny Kaomandin’ny borigadin’Ambohimangakely ny momba ireo mpanafika. Isan’ireo fantatra fa nanafika tamin’izany ny jiolahy fantatra amin’ny anarana hoe Banga. Io jiolahy io efa niditra am-ponja indroa ny 2017, tamina raharaha vaky trano, ny 2018 indray, dia nanao fanafihana mitam-piadiana tao amin’ny faritra Tsarahasina. Nivoaka ny fonja izy tamin’ny desambra 2019, ary izao nanao ny asa ratsiny miaraka amin’ny jiolahy raindahiny antsoina hoe Raiks. Natao ny vela-pandrika rehetra ka tratran’ny zandary ireo roa lahy ireo. Efa fantatra koa ny toerana misy ireo naman’izy ireo niara-nanatanteraka ny fanafihana. Koa andrasana, araka izany, ny fivoaran’ny toe-draharaha sy ny hisamborana azy ireo. Nanamafy ny Kaomandin’ny borigady ao Ambohimangakely, « fa araka ny tenin’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, fa ny jiolahy indray no hihorohoroho, ary tsy maintsy atao izay hampandry fahalemana ny vahoaka, ahafahany miatrika ny fitadiavany.
FOTOTRY NY TETIKASA MIAMI RAVA: Tsaho niniana naely ho fanakorontanana
FIATREHANA NY CORONAVIRUS: Ho tonga rahampitso ny vaksiny Johnson & Johnson 302 400 fatra